သင်ဒီမှာပါ: Home / သဲကန္တာရ Solutions / အဆိုပါသဲကန္တာရထဲမှာ Holes တူးခြင်းအားဖြင့်သဲကန္တာရ Fight
ဟုတ်ကဲ့! တစ်ဦးက solution ကိုသဲကန်တာစစ်တိုက်ခြင်းငှါရှာတွေ့ထားပြီဒါပေမဲ့ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုကျော်လွန်ပြီး, လူနှင့်သူ၏ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်နိုင်အောင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိသည်: အဆိုပါသဲကန္တာရရပ်သွားဘယ်သူက Man. His name is Yacouba Sawadogo,afarmer in Burkina Faso. A lot has already been said about Yacouba, so I am not going to repeat his wonderful story. See the reference box at the end for more information!
သဲကန္တာရစစ်တိုက်ခြင်းငှါဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေခြင်းရှည်လျားလွန်းများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုခြေသိရသည်။ ငွေမည်မျှပြီးသားသုံးစွဲခဲ့! ငါကစဉ်းစားဖို့မကြိုက်တတ်တဲ့! အဆိုပါ: နှင့်အဖြေ Burkina Faso အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ကိုအသုံးပြုထားပြီး, ထိုအရပ်၌ပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည် zaï.
Yacouba Sawadogo, Burkina Faso အတွက်လယ်သမားတစ်ဦး, အာဖရိကရဲ့ Sahel ဒေသအနှံ့ယုတျညံ့မြေယာပြန်လည်ကြောင်းတစ်ခုဆန်းသစ်စိုက်ပျိုးခြင်း technique ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
သင် Sahel အတွက်အသက်ရှင်လျှင်နွေဦး, ဒါမှမဟုတ်ခြောက်သွေ့ရာသီအတွင်းဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါ
သငျသညျ 400 မီလီမီတာနှင့်တစ်နှစ်လျှင် 800 မီလီမီတာအကြား, အနိမ့်မိုးရေချိန်နှင့်အတူခက်ခဲမှုအဖွဲ့မြေကြီးတပြင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် 30cm နက်ရှိုင်း 20cm အကြောင်းကိုတစ်ဂေါ်ပြား-ပုဆိန်နှင့်မြေသို့တွင်း hack, တန်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်
သင့်ရဲ့တွင်းကျော်က forward အဆင့်နှင့်ဧရိယာကိုလုံးဝတွင်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းသည်အထိဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်
ဆွေးနှင့်အတူသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ဖြည့်ပါ။ ဤသည်အရွက်, ပုပ်စပ်လျက်ရှိ၏နွားမ / သိုးမစင်ကနေဖန်ဆင်းတော်, ထင်းလောင်စာမီးဖိုကနေပြာကိုရနိုင်
တစ်ခုချင်းစီကိုမြေတွင်း၌ပြောင်းဆန်သို့မဟုတ် sorghum အနည်းငယ်မျိုးစပါးထား
အများဆုံးအကြီးအစိတ်ကူးများကဲ့သို့ပင် Zai ရိုးရှင်းတဲ့နဲ့အလွယ်တကူဆက်သွယ်အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်သင့်ကိုယ်ပိုင် Zai တွင်းစေရန်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်:
VIDEO - အဆိုပါကန္တာရရပ်သွားသူကားအဘယ်သူအဆိုပါက Man
source အပိုဒ် - တောရပ်သွားဘယ်သူက Man
Planet ကို Fixer ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက် - သဲကန္တာရပုဒ်မ